HomeWararka MaantaGuddoomiyaha Kooxda Wasaarada Maaliyada Oo Kawaramay Heerka Ay Kooxdu Marayso iyo Safaro Dhawaan Ugu Bixi Doonaan Gobolada Jsl.
Gudoomiyaha kooxda kubada cagta ee Wasaarada Maaliyada JSL, Kamaal Maxamed Yuusuf ayaa ka xog waramay heerka horumarka kooxdu Marayo iyo Sidoo kale Safaro Tiro-badan oo dhawaan U Qorshaysan inay u baxaan gobolada Jamhuuriyda Somaliland.
Kooxda Wasaarada Maaliyda oo kamid ah kooxaha heerka koowad dhawaanahan ugu cad-cad guud ahaan Somaliland. Laacibiinta u safta kooxdani ayaa ka kooban ciyaar yahano u kala ciyaara dhamaan gobolada JSL.
Hadaba gudoomiyaha kooxda Wasaarada Maaliyada Mr. Kamaal Maxamed Yuusuf oo waraysi gaara siiyey Wargayska Geeska Afrika ayaa Nooga xaal waramay siday kooxdu uga qayb-qaadato horumarka dalka, sportska iyo safaro u qorshaysan inay dhawaan kusoo maraan gobolada JSL intooda badan.
ugu horayn isagoo ku hadlaya afka kooxda Wasaarada Maaliyada waxa uu si gaara ugu mahadnaqay wasiirka wasaarada maaliyada jsl Marwo: Sam-sam Cabdi Aadan oo si wayn uga qayb-qaadata markasta horumarka kooxda.
Gudoomiye Kamaal oo ka waramaya xaalada iyo Heerka ay kooxdu marayso waxa uu yidhi: “kooxdu waxay abaal iyo mahad naq u haysaa wasiirka Wasaarada Maaliyada Marwo Sam-sam Cabdi Aadan sida hagar la , aanta ah ee ay kooxda u garab taagan tahay, koox ahaan waxaanu dhisnayn muddo saddex sanadood ah, ujeedada ugu wayn ee kooxdu waa inay qayb-laxaad leh ka qaadato wacyi-galinta cashuuraha wasaaradu qaado”.
Kamala ayaa intaasi sii raaciyey “ kooxda waxaa u ciyaara laacibiin tayo fiican oo u kala safta gobolada Jsl, dhab ahaan kooxdu waxay maraysaa heerkii ugu fiicnaa waxayna qaadataa tobabaro, wallow koox ahaan mudadii aanu jirnay aan wax koobab/tartamo ah loo qaban kooxaha heerka koowaad ee aanu ka tirsanahay”.
Ugu dambayn guddoomiyaha kooxda Wasaarada Maaliyda JSL ayaa sheegay inay kooxdu dhawaan Safar ugu bixi doonto Gobolada Jsl isagoo sheegay waliba inay ku horayn doonaan safarkasi Gobolada Galbeedka ee Gabilay iyo Awdal.
Kamaal oo arintaasi ka hadlayaana waxa uu yidhi: “kooxdu waxay safaro ugu bixi doontaa gobolada galbeedka Jsl dhawaan, anagoo lasoo ciyaari doona ciyaaro saxiibtinimo”.
Shirqool Lagu Dhacay Lovren Oo Qiso Murugo Lihi Ka Soo Baxday – Xaaska Iyo Carruurtiisa Ayaa Lala Wareegay
Zabaleta Oo Macasalaamayntii Man City Kaddib U Wareegaya Koox Kale Oo Ingiriis Ah
18/05/2017 Abdiwahab Ahmed
Daawo : Goolwadaha Ugu Goolasha Badan Dunida Oo Goolkiisii 118 aad U Dhalinaya Kooxdiisa